Blockchain Izindaba 10 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Januwari 10, 2018 admin
Metatron kudedela platform cryptocurrency kuthengiselana
Metatron, iphayona ubuchwepheshe onguchwepheshe ukukhululwa yashesha ka phezu 2000 Ama-app imemezela ukukhululwa kwe BitMeet ™, isiteji cryptocurrency kuthengiselana nge intengo kokulandela kanye nendawo amasevisi atholakala manje ku-Google Play.
izici Bitmeet ™ ka- zihlanganisa wengxoxo, izindawo abasebenzisi abafuna ukuthenga futhi adayise cryptocurrency, namanani entengo, emakethe cap, izindaba zakamuva nokunye okuningi. Iyatholakala manje ku-Google Play, silindele ukuba akhululwe-iOS amadivayisi esikhathini esizayo esiseduze.
"Platform cryptocurrency yethu Bitmeet ™ kuzosiza ukuletha uquqaba ekugqilazweni eyodwa Fiat yasebhange, ukudala isizukulwane esisha umthengi ubuhlobo ukuvela izimakethe capital kweqiniso okusekelwe inkambu ezingeni nokudlala,"Kusho isikhulu esiphezulu enkampanini Metatron Joe Riehl.
Direxion, ProShares, VanEck ukuhoxisa Bitcoin ETF imvuthuluka
Direxion, ProShares futhi VanEck babephakathi nedlanzana ETF issuers ukuthi baye bayishiya imvuthuluka ukuqalisa bitcoin ETFs ngesicelo U.S. nabalawuli.
On inothi ahlobene, I SEC ufuna lokufaka imithetho izinguquko ehlongozwayo ngu Chicago Board Izinketho Exchange (CBOE) ezingase ukuvumela exchange uhlu kuze kube ETFs ezine bitcoin. Cboe kwaba exchange opharetha lokuqala U.S. ukwethula ikusasa esekelwe lwemali digital, senifeze ngenyanga edlule ngakho.
kuze kube manje, kungekho imikhiqizo exchange adayiswa ezihlobene zezimali digital eziye kugunyazwe U.S. nabalawuli.
Goldman Sachs: Okwazekayo Bitcoin kungaba ifomu esisemthethweni imali
Bitcoin kungaba ifomu esisemthethweni futhi okwandile imali kodwa ikakhulu ngemcondvo, okwamanje, ngokuvumelana Goldman Sachs strategist.
“Ukusetshenziswa kabanzi dollar ngaphandle kwe-US - futhi dollarization umnyuziki kwamanye amazwe - kusikisela khona kakade kufunwe i naphakathi wamukela omhlaba zokwenana nalo esitolo lenani,” wathi Goldman sika Zach Pandl noCharles Himmelberg kunothi ngoLwesithathu.
Kulawo mazwe futhi amakhona uhlelo lwezimali lapho amasevisi yendabuko nemali Akakwazanga enikeziwe, bitcoin (futhi cryptocurrencies ngaphezulu ngokuvamile) zingase zinikeze izindlela iphila.
Ngokwesibonelo, bitcoin exchange amavolumu angena ngomfutho China ngemva izwe waqala clamping phansi inhloko-dolobha yiziphethu e 2016.
Ngalowo mqondo, kukhona ukufunwa bitcoin njengoba oluthile imali ukwenza ukuthengiselana. Kodwa njengengxenye iphothifoliyo lwemali, cryptocurrencies kukhona “okungaguquguquki nge bubble zakudala zokucabangela,” i-strategist wathi. Baphawula ukuthi naseJapane linqobe bitcoin exchange amavolumu, kodwa nazo emazweni izinhlelo esitebeleni yemali.
Iqiniso liwukuthi cryptocurrencies kusadingeka ibha okusezingeni eliphezulu zokulawula ukusula ezindaweni eziningi, i-strategist wathi. Ukuze uqale nge, ohulumeni abakwazi ukulandela ubani ukukhokha noma ethola zezimali digital.
Goldman Sachs kubikwa elungiselela edeskini cryptocurrency zokuhweba.
uwoyela wasekela cryptocurrency Maduro yasichitha yiphalamende waseVenezuela
WaseVenezuela ephalamende ukuphikiswa ukusebenzisa ngoLwesibili ivalwa a "Petro" cryptocurrency kugqugquzelwa uMongameli sezenhlalo Nicolas Maduro, ukusibiza umzamo udayise ngokungemthetho sikawoyela lizwe imali-ziboshelwa sika.
Maduro ngoLwesihlanu uthe uhulumeni wakhe lizokhipha cishe $6 billion Petros njengendlela ukukhulisa lwemali kanzima futhi ukugwema unswinyo zezimali ebekwa Washington.
Cryptocurrency ochwepheshe bathi Ukusaphazwa Venezuela sika umnotho ayo, kuhlangene yokuntuleka isinqumo Socialist Party okuwumlando lokuhlonipha yangasese amalungelo endawo, Mhlawumbe ushiya zimali awazikhathaleli ekuzuzeni Petros.
"Lena akuyona cryptocurrency, lena ukudayiswa phambili lamafutha waseVenezuela,"Kusho lesishaya Jorge Millan. "Kuyinto zenzelwa ukonakala."
Maduro uye njalo indiva isishayamthetho njengoba iqembu lakhe uhlulekile ukulawula kuyo 2016, kanye neNkantolo pro-uhulumeni Ephakeme wadubula phansi cishe zonke ngesilinganiso kudlule ke.
Maduro luthemba kumelwe kusebenze njengesibonakaliso indlela yokukhokha for nabathengisi bakwamanye amazwe futhi ugweme izinkokhelo ukubambezeleka ukuthi usukhulile acute ngaphezulu kusukela unswinyo wangena endaweni.
Isikhwama Trat uTom Lee: Bitcoin lalingabulawa kalula kabili e 2018
Omunye wabalandeli abakhulu bitcoin izinkunzi Wall Street uthi cryptocurrency ayengakwenza “kalula double” noma ngisho kathathu e 2018.
“Ngisho nsuku ingozi abazinzile, Ngicabanga bitcoin uya kalula ziphumelela kangcono S&P,” Lee uthe ngoLwesibili CNBC sika “Futures Manje.” “Malanga eside, indlela elula ukubheka bitcoin kunjengesipho ukukhishwa noma esitolo lenani,” uthe. “Ngakho njengoba millennials bathole futhi imali, Bazophuma ukuyisebenzisa indawo igolide.”
“Uma bitcoin uthola 5 amaphesenti emakethe igolide, lokho cishe $ 50,000,” wanezela. Leyo ezingaphezu kuka 200 amaphesenti asuka lapho bitcoin okwamanje zokuhweba.
Malanga eduze eside, Lee ulindele bitcoin zokufuna Disemba yaso ephezulu. “Sicabanga ukuthi phakathi nonyaka ka-2018, sesikude ukuba yingxenye indlela lapho, yingakho sithola [bitcoin ukuze $20,000],” uthe. “Uma bitcoin empeleni avuke eduze ukuthi $20,000 ezingeni engxenyeni yokuqala ka kulo nyaka, Ngicabanga engxenyeni yesibili 2018, Sizobona Ukuthutha ezinkulu kunalokho,” Lee uthe. “Ngakho ngicabanga bitcoin namanje into kufanele wawo wonke unyaka.”
Tngem, a har mfihlo ...
Thumela Previous:Ubani owenza umnikelo enkulu embonini mfihlo? Top 7
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 11 Januwari 2018